मध्यराति अचानक महिलाको शरीरमा केहि टाँ- सियो, छाम्दा भेटियो कसैले कल्पना नगरेको चिज (हेर्नुहाेस) - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियमध्यराति अचानक महिलाको शरीरमा केहि टाँ- सियो, छाम्दा भेटियो कसैले कल्पना नगरेको चिज (हेर्नुहाेस)
मध्यराति अचानक महिलाको शरीरमा केहि टाँ- सियो, छाम्दा भेटियो कसैले कल्पना नगरेको चिज (हेर्नुहाेस) । बिहारको मंगेर जिल्लाकी एक महिलाको ज्या-न त्यतिबेला सं* कट-मा पर्यो जतिबेला मध्यरातमा अ* चा-नक उनलाई एक ना * ग-ले बे* र्यो ।
वि* चि* त्रको आवाज सुनेपछि निन्द्राबाट ब्यूँ* झि* एकी महिला आफ्नो शरीरलाई ना* ग* ले बेरेको देखेपछि उनि ड* रा*इन । ड* रका कारण उनको आवाज पनि निस्किएन । बिहारको मंगेर जिल्लाको इटहरी पंचा-यतको कल्याणटोला गाउँमा मनोज मण्डललकी पत्नी पु-तु-ल देवीको शरीरलाई करिब डेढ घण्टासम्म नागले बे* ’रे* ’र राखेको थियो ।
राति सुतेको बेला एक स* र्प* ले उनको बायाँ खुट्टालाई बे* रे* को थियो । जब आफूलाई अ* प्ठे-रो महशुस भएपछि उनको निन्द्रा खुल्यो र हेर्दा उनको सा* तोपु* त्लो गयो । त्यसपछि उनको परिवार र छिमेकी त्यहाँ पुगेर भगवानको नाम जप्न थाले । त्यसपछि सो स* र्प आफैं त्यहाँबाट गयो ।
ती महिलाका अनुसार उनी भूँयमा सुतेकी थिइन् । उनको खुट्टा झुलभन्दा बाहिर थिए। राति २ बजे आफ्नो खुट्टामा केही भएजस्तो लागेपछि उठेर हेर्दा बायाँ खुट्टा स * र्पले बे* रे- को रहेछ । सा* प देखेपछि महिलाले हात जोड्दै भगवानको नाम जप्न थालिन्।
पछि महिलाका छोराले सबैलाई आमाको खुट्टालाई स *र्प- ले बे* रे* को सुनाए । त्यसपछि सबै छिमेकीलाई पनि यो विषयमा बताइयो । केही समयपछि गाउँले भेला भएर भगवानको नाम जप्न थाले । त्यसको डेढ घण्टापछि सा *प* ले महिलाको खुट्टालाई छोडेर आफैं त्यहाँबाट गयाे ।
बेलायतमा देखियो ओ’मिक्रोनको सहप्रजाति, ४०० भन्दा बढी संक्रमित
यी सपनाले दिन्छ १० दिनपछि हुने घटनाको बारेमा संकेत, कतै तपाईले देख्नुभयो की ?
मनकामना लाई केन्द्रविन्दु बनाएर भर्खरै गयो यति ठूलाे भूकम्प !
श्री मुक्क्तिनाथ मन्दिरलाई सेयर गर्दै दर्शन गरी, आजकाे राशिफल पढ्नुहोस मनोकामना पूरा हुनेछ